Indlela kiss inkanuko ngaphandle ulimi? Amathiphu intsha
Ikhono wengeze amaphuzu esebanga iyiphi ingane. Phela, kulobu budala, abafana namantombazane uqale hhayi nakho kuphela, kwakhulisa isithakazelo umzimba womuntu siqu nabobulili obuhlukile, kodwa futhi ukufuna kukho konke ukuze zibe abantu abadala, futhi ngisho ezimpilweni zabo siqu - kwasekuqaleni.
Futhi ukuba abe nesifiso sokujabulisa kwenza intsha ngaphambili futhi ngaphambili ukuqonda isayensi lothando. Futhi into yokuqala ukuthi ngokuvamile ufuna ukwazi abantu abasha - indlela esebanga inkanuko kahle. Izingane wamsingatha into abangenacala umunyu esidlule, ngaphezu kwalokho, azilona okuyihlazo. Phela, omdala ngempela ngempela ukunikeza nomunye obujulile abanothando kiss.
Nokho, lapha endleleni eya ekubeni izinsizwa nezintombi kuphakama isizotha zemvelo. Phela, njengoba umbuzo kanjani esebanga inkanuko, isoka noma enye intombi e isigaba sokuba umuntu omdala kumane kwenye ukuze ujike. Abazali zinyamalale: zingabantu, ngokubona inzalo ezikhulayo, kungaqondakala ngendlela yesimanje! Friends of ubulili bakho impendulo yalo mbuzo futhi asifanele: bayavuma ukuthi awazi ukuthi esebanga esifana ukubhala yena emabunzini "isiphukuphuku."
Futhi ngenxa yalokho, abafana namantombazane amaningi benza iphutha futhi ufunde ubuciko ngokuthinta isibonelo ithelevishini namaqhawe. Futhi phezu blue izikrini ngasizathu simbe avame ukubonisa inguqulo isiFulentshi angiqabule. Zidinga nakho okumangalisayo ukuze anikeze ubumnandi zombili izinhlangothi.
Nanka amazwi lokuqala
Futhi ngakho ichopho yokuqala Ngifuna ukunika intsha: abafana, okokuqala kudingeka ufunde indlela esebanga inkanuko ngaphandle ulimi. Futhi believe me, lokhu akunandaba ngempela. Okokuqala, khumbula: ibe yisibambiso beneme - hhayi kuphela emkhakheni nakho, kodwa futhi impilo. Yebo, yokuhlanza njalo amazinyo, ukusetshenziswa ushingamu ngemva kokudla futhi mouthwash uzokwenza kiss yakho ekhumbulekayo okuningi futhi kujabulise kunangaphambili ukuthi ngibhema ugwayi noma ambalwa ichithekile amazinyo aphuzi.
Indlela kiss inkanuko ngaphandle ulimi?
Umthetho wesibili lokhu art - musa ukhotha izindebe zakhe phambi ukuqabulana. Emanzi, slavering touch ezinhle kuwo wonke umuntu, ikakhulukazi uma emhlabeni cool, nezindebe baye simisiwe. Uma ucabanga ukuthi baqinisa noma phezu-omisiwe, sicela lipstick yokuhlanzeka. Futhi abafana, lokhu kusebenza futhi.
Yena kiss amasu ilula. Musa ngokushesha sifinyelele "umhlatshelo" yabo. Ukuhlasela nokucindezelwa akuzona kahle lolo daba olubucayi njengoba ubuhlobo obuseduze nabanye. Kungcono kancane uthinte izindebe zakhe izindebe Pass. Zicabange - umoya, flying esidlule. Kodwa kamuva, ngo-inqubo ukuqonda ukuthi isayensi kufanele kube kancane ukuba bazimisele kakhudlwana futhi siphikelela.
Indlela kiss inkanuko ngaphandle ulimi? izindebe Ukuthinta kufanele ibe mnene, sengathi ozama ice cream nokwesaba eqandisiwe. Ngaphambili, ngasizathu simbe, kukholakala ukuthi ukuqhuba isidingo ukuqabulana isitoko up on utamatisi kanye ucije ubuciko babo, abancela inyama. Uma ngikhuluma iqiniso, ngakho kunalokho ungathenga kwamakhono cleaner wezindlu kunokuba nesipiliyoni ukuthandana. Kodwa lapho Ungowokuqala okuxhunyanwa naye usevele kushintshwe, umane ke wabe isigqi nomlingani, futhi kuba - iseluleko ewusizo kakhulu isayensi esihle ngale ndlela. Sithemba ukuthi ngokusebenzisa lesi sihloko, okufundile nendlela kiss inkanuko ngaphandle ulimi.
Ngobani fetishists? Ophendukezela noma bemibono?
Kanjani ukuba zilulame ngokushesha emva kocansi: izimfihlo webanga ucansi
Yini siyingozi njengomuntu wesifazane embhedeni?
Umzimba wethu silusebenzise: indlela ayafeba?
"Pearl of the Cape", Gelendzhik: Ihhotela Izinsiza kanye izibuyekezo zezivakashi
Kungani futhi lapho wanyamalala "amadombolo Ural" Sergei Netievsky
Theory eyisisekelo umsuka isimo, kusukela endulo kuze kube namuhla
Inyama yenkomo multivarka "Redmond": izindlela sokulungiselela
Umlobi Tatiana Forsch: Biography, izincwadi ezingcono kakhulu, futhi amaqiniso athakazelisayo
Fashion umklami Elsa Schiaparelli. Biography, umsebenzi Elsa Schiaparelli
Ukuthethelelwa ukuzindla - inqubo enamandla kunazo zonke emhlabeni
Amathiphu bodybuilder: trapezius muscle umzimba for izinga lokwehla kwamandla emali yalo.
Amazambane ezikhulayo amasu, kanye ukutshala amazambane okusha ngaphansi utshani
Indlela yokubeka etafuleni usuku lokuzalwa, ukuze iholide izokhunjulwa isikhathi eside
Comedy "Ted": abadlali kanye nencazelo